Totankamôna - Wikipedia
Anarana : Totankamôna
Teraka : 1 Janoary -1340
Maty: 1 Janoary -1322
I Totankamôna dia faraôn’i Ejipta tamin’ny taona 1333 hatramin’ny 1323 tal. J.K. nandritra ny Empira Vaovao. Teraka tamin’ny taona 1340 ary maty tamin’ny taona 1322 izy. Mety zanak’i Amenôfisy III sy rahalahy tsy iray reny tamin’i Akenatôna ilay nitondra ny anarana hoe Totankatôna ("sary velon’ i Atôna") izay nanambady an’i Anksenpatôna (niova anarana hoe Ankesenamôna taty aoriana), zanaka vavy fahatelon’i Akenatôna tamin’i Nefertity. Tamin’ny fahasivy taonany izy dia nandimby ny rafozan-dahiny teo amin’ny fanapahana an’i Ejipta.
Nisy akony teo amin’ny fisainany ny fanabeazana azony tamin’i Ay mpitaiza azy sy ny traikefa azony tamin’ilay mpitari-tafika atao hoe Hôremheba, izay samy mpivavaka mahafatra-po tamin’ny andriamanitra Amôna-Ra (na Amôna-Re), ka novany ho Totankamôna ("sary velon’i Amôna") ny anarany sady naveriny indray ny fivavahana amin’andrimanitra maro (politeisma) izay nofoanan’ny faraôna teo alohany, ka nasongadiny indrindra ny fivavahana tamin’i Amôna. Nandritra ny fanapahany dia nandry fahalemana i Ejipta, nafindrany tany Tebay (na Teba) ny toeram-ponenany ka navelany i Aketatôna, ilay renivohitra naorin’i Akenatôna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Totankamôna&oldid=1000581"
Dernière modification le 21 Janoary 2021, à 10:57
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2021 amin'ny 10:57 ity pejy ity.